Xoolo-dhaqato ay abaar saameeysay oo xoolahooda u gadi waayay gallayda oo qaali noqotay - Radio Ergo
Xoolo-dhaqato ay abaar saameeysay oo xoolahooda u gadi waayay gallayda oo qaali noqotay
(ERGO) – Xoolo-dhaqatada ku nool deegaanka Bulal ee gobolka Sool ayaa xoolahooda ku quudinayay gallay, maaddaama ay deegaanka abaar ku habsatay oo uusan lahayn biyo iyo baad toona. Balse waxaa bishii Oktoobar ee sanadkan qaaliyoobay qiimaha lagu iibsado gallayda.
“Markii hore ee ay jabnayd helisteeda waa sahlanayd, hadda qaali bay noqotay oo cid goyn kartaa ma jirto, xitaa dayn ku heli maysid. Xoolihii waxaa ku dhacay inay waayaan waxa ay cunaan, caatoobaan, baahi badani ku dhacdo, wixii jilicsanaa ay meel gaari wayaan,” ayuu yiri Ciise.
Loorka gallayda ah ee 50-ka kiilo qaada ayaa hadda la iibinayaa 27-30 doollar, taasi oo aysan xoolo dhaqatadu awoodin. Wixii ka horreeyay dhammaadki bishii Oktoobar waxay loorkii ku iibsan jireen 8-10 doollar. Kororka ku yimid qiimaha galleyda waxaa sabab u ah dalabka xoolo-dhaqatada oo batay. Galleyda lagu iibiyo gobolka Sool ma aha mid ku baxda halkaasi oo waxaa looga keenaa dalka Itoobiya.
“Gallaydu xoolaha waxay u leedahay nacfi badan oo sida geedaha oo kale ah. Neefku wuu ku gaajo beelayaa, waa ku naaxayaa kii irmaanaa caano ayuu ku yeelanaya,” ayuu yiri Ciise.
Ninkaan ayaa bishii Septembar laga iibsaday saddex neef oo ari ah. Xoolaha u soo haray ayuu sheegay inay dhamaantooda caato yihiin oo aysan ku jirin mid uu suuqa gayn karo. Welwelka ugu badan ee haysta ayaa ah in uu arigu ka dhammaado isagoo fiirinaya, maaddaama uusan u hayn calaf ay cunaan iyo dhaqaale uu ku badbaadiyo.
Ciise Cabdiraxmaan oo uu qoyskiisu todobbo qof ka kooban yahay ayaa sheegay in reerkiisa ay biyaha muddo bil ah ku cabbayeen dayn laguna leeyahay 180 doollar.
Ciise ayaa bishi tobanaad ka soo hayaamay miyiga tuulada Tuka-raq ee isla gobolka Sool, xilligaas oo roob aan badnayn uu ka da’ay deegaanka Bulal. Boqollaal qoys oo xoolo-dhaqato ahaa oo u soo hayaamay awgeed ayaa daaqi yaraa ee soo baxay iyo biyiihiba dhammaadeen, taas oo keentay in qoysaska qaar ay mar labaad u hayaamaan deegaannada waqooyi ee gobolka Sool. Ciise iyo qoyaska la mid ka ah ee guuri waayay ayaa la daalaa dhacaya badbaadinta xoolahooda.
Iidle Maxamed Warsame, waxaa tan iyo bishi Nofeembar ka dhintay ari boqol neef ah kaddib markii uu u awoodi waayay inuu u gado gallayda oo uu muddo sedex bil ah ku baxnaaninayay, ka hor inta uusan qiimuhu qaaliyoobin.
“Halkii neef ee ari 30 doollar ayaa nalaga siin jiray, waxayna noo goyn jirtay labo ilaa saddex kiish.  Bishii tobanaad ayaa igu dambeysay inaan suuqa xoola geeyo, waxaana la iga siistay labo neef midkiiba 30 doollar. Markaas ayaa ugu dambaysay oo aan xoolaha gallay siiyo. Intii aysan gallaydu qaali garoobin xoolaha waan siin jirnay, wayna ku noolayeen, laakiin hada ma awoodo,” ayuu yiri.
Ariga Iidle oo seddex boqol oo neef ahaa bishii Oktoobar hadda waxaa ka soo haray labo boqol oo boqol ka mid ah ay xerada fadhiyaan, maaddaama socon kari waayeen. Wuxuu aad uga welwelsan yahay haddii uu xaalku sidan sii ahaado waxa dhici doona.
Maxamuud Maxamed Aadan wuxuu sheegay in qiimo kororka galayda ay xoolaha siisan lahaayeen inay dhibaato wayn ku tahay xoolahooda. Ninkaan ayaa sheegay in isaga iyo xoolo-dhaqatada kale ee ku nool deegaanka ay xoolahooda abaartii 2016-2017 ku badbaadsadeen galleyda. In kastoo qiimaha galleyda markaasi uu sare u kaca ku yimid haddana ma aysan gaarin heerka ay hadda joogto. Qiimaha galleyda waxay xilligaas gaartey ilaa iyo $20.
Maxamuud ayaa sheegay in hadda lagu leeyahay $250 oo uu biyo ugu iibiyey xoolihiisa oo ah 160 neef oo ari ah. Wuxuu xusay in uusan aqoon sida uu isaga bixin doono lacagtan daynta ah haddii uu xaalka sidaan sii ahaado.
Qoysas ay abaartu ku kala xannibtay Bakool
Bacaad laga qaaday waddooyinka Hobyo oo sahlay in dib loo furo ganacsiyo ku xirmay